Qoraalku wuxuu kuu badbaadin doonaa daqiiqado aan raaxo lahayn adiga oo qoraaya qoraalada codkaaga | Wararka IPhone
Falanqaynta iyo bakhtiyaa-gareynta 'Textify', barnaamijka u beddelaya qoraalada codkaaga qoraal isla markiiba
Waxaad ku jirtaa fasal ama kulan waxaadna sugeysaa fariin muhiim ah. Ugu dambeyntii wuu yimaadaa, laakiin wuxuu ku sameeyaa qaab qoraal cod ah, oo sameeya suurtagal maaha in la helo nuxurkeeda iyada oo aan la soo jiidan dareenka. Haddii, sida aniga oo kale, aad ka qoomameysay wax ka badan hal jeer in xiriiradaadu ay kuu soo diraan qoraalo cod halkii aad uga diri lahayd farriimaha qoraalka ah, waa adiga
Waxay kuxirantahay nooca xiriirada ka muuqda ajandaheena iyo sida aad u jeceshahay qoraalada codka, maalinteena maalinteena waxaa si weyn loogu calaamadeyn karaa qaabkan isgaarsiinta barnaamijyada fariimaha degdega ah. Aad iyo aad ayey u badan tahay oo aysan noqon doonin wax aan caadi ahayn xaaladda aan soo sheegnay inay dhacdo, halkaas oo aannaan maqli karin farriinta wakhti kasta duruuf kasta ha noqotee. Xalka? Sida ugu fudud ee rakibidda barnaamijka.
1 Ku dhowaad tarjumaad deg deg ah
2 Isku day Qoraal bilaash ah
Ku dhowaad tarjumaad deg deg ah
Qoraalku waa codsi aad u fudud oo, sida marar badan, tani waa waxa ka dhigaya wax fiican. Marka la soo koobo, waxa barnaamijkani na siinayo waa suurtagalnimada qor qoraallada cod ee ay noogu soo diraan WhatsApp, iMessage, Line ama Threema, iyaga oo noo muujinaya iyaga oo qaab qoraal ah sidaa darteed, xaalad kastoo aan ku sugan nahay, aan ku heli karno nuxurka farriinta. Tani waa barta ugu weyn ee kaliya ee iibinta, maaddaama aynaan wajahayn mid ka mid ah barnaamijyadan ay ku hareeraysan yihiin faan iyo rashka: waxa ay bixiso ma aha wax intaas ka badan oo aan ka yarayn waxa ay cayimayso bilowgii.
Tallaabooyinka la raacayo si loo helo xusuusqorkeena cod qoraalka ah ayaa aad u fudud; mar gudaha mid ka mid ah barnaamijyadooda fariimaha la jaan qaadaya, sidaas Kaliya waa inaad doorataa farriintaas oo aad la wadaagtaa Textify iyada oo loo marayo kordhinta macruufka. Abka laftiisa ayaa tilmaamaya habka ugu haboon kiis kasta, markaa waa inaanan ka walwalin tan. Intaa ka dib, waxaa naloo wareejin doonaa barnaamijka, kaas oo naloo weydiin doono inaan dooranno luqadda lagu helo qoraalkaas codka ah (haddii ay dhacdo in aan dooranno wax ka badan hal) iyo, dhowr ilbiriqsi, waxaan awood u yeelan doonnaa akhri qoraalka lagu turjumay shaashadda.
Waa inaan maskaxda ku haynaa in dalabku imika soo baxay oo, sidaa darteed, aan la safeynin ugu badnaan. Waa wax aan ogaan doonno, tusaale ahaan, haddii codbixinta ku jirta qoraalada codku aysan fiicnayn ama hadalka uu yahay mid dhakhso badan, taas oo keenta in qoraallada la turjumay lagu muujiyo jajabyo aan is waafaqsanayn. Sidoo kale, waa loo seegay inay taageero u leedahay barnaamijyo badan (Telegram, tusaale ahaan), in kastoo ay u badan tahay inay waqti tahay.
Isku day Qoraal bilaash ah
Fudeeda iyo fudeydkeedu waxay naga dhigeysaa inaan qiimeyno Qoraal badan, maxaa yeelay runtii waa wax aad u fudud in la akhriyo qoraalka qoraalada codka adigoon waqti lumin muhiim ah. Kaliya labo 'taabasho' waxaan ka boodnay barnaamijka farriinta illaa mid kan waxaanna diyaar u ahaan doonnaa xukunkeenna oo la akhrin doono. Xaqiiqdii ma noqon doonto codsiga aan inta badan isticmaalno maalinta oo dhan, mana noqon doono kan ugu cajaa'ibka badan ee aan ku rakibnay iPhone-keena, laakiin wuxuu noqon doonaa caawimaad aad u weyn waqtiyada gaarka ah.
Codsiga Waxaa laga heli karaa App Store qiimo ahaan a 3,49, qiimo dib u dhigi kara qaar badan oo ka mid ah kuwa aan haysan durdur joogto ah oo maqal ah oo ku sugaya barnaamijyadooda fariimaha. Taasi waa sababta ka socota Actualidad iPhone waxaan dooneynaa shan idinka mid ah inaad ku raaxeysan kartaan gabi ahaanba bilaash.
Ku guuleysiga liisanka si aad u soo degsato Qoraallada bilaashka ah waa mid aad u fudud: waxaan u kala bixi doonnaa laba shati inta u dhexeysa kuwa sameeya RT to Tweet ee maqaalkan lagu dhajiyay koontada @A_iPhone, laba kale oo ka mid ah kuwa la wadaag gelitaanka la soo dhejiyay xisaabta Actualidad iPhone ee Facebook iyo mid kale oo ka mid ah dhammaan kuwa ka tag faallo qaybta ka hooseysa sadarradan. Xadka waxaa la dhigay 23:59 pm (waqtiga jaaniska Isbaanishka) Axada soo socota, May 14. Nasiib wanaagsan!
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Barnaamijyada IPhone » Falanqaynta iyo bakhtiyaa-gareynta 'Textify', barnaamijka u beddelaya qoraalada codkaaga qoraal isla markiiba
Runtu waxay tahay in barnaamijyada sidan oo kale ah ay yihiin kuwa macno u siinaya wax soo saar iyo utility ee ma aha kuwa kale oo aad u tiro badan. Ma aanan isku dayin laakiin waxaa jira munaasabado badan oo runtii aniga i isticmaali kara. In ka badan hal jeer ayaan ku xanaaqay saaxiibbaday inay ii soo diraan qoraalo cod markii aan maqli kari waayo.
Aad u xiiso badan, aniga ayey igu dhacday wax ka badan hal jeer si aan u helo cod aan awoodin inaan dhagaysto, barnaamijkani wuxuu ka saari lahaa shakigayga haddii ay muhiim tahay iyo in kale, waa mid ka mid ah barnaamijyadan aanad garanayn waxaad u baahan tahay illaa way jiraan, mahadsanid digniinta!
Murugo Ramon dijo
Codsi meel fog gaari kara, markaan shaqada ku jirno, kulan ama fasallo iyo qoraaladaas codka ah ayaa yimid oo xilligan aanad maqli karin, ikhtiyaar fiican ayaa ah codsigan.
Ku jawaab Ramon pena
Aad waxtar badan u leh gaar ahaan kuwa aan u baahan nahay in aan duubno cajaladaha. Waxaan rajeyneynaa in waqtiga kadib ay ku sifeyn doonaan iyada oo la tixgelinayo aqoonsiga codka, maaddaama ay tani tahay halka ay dhibaatada noocan ah ee codsiyada ku taal.
Waxay ku habboonaan laheyd waxyaabo badan sida duubista warbixinnada kadibna qoridooda iyo waxyaabo kaloo badan. Waxaan u arkaa mid rajo badan leh. Aynu aragno hadday tahay markayga 🙂
Markii aan aqrinayay warka waxaan u maleeyay sida ay faa'iido u yeelan laheyd haddii fikradaha oo dhami ay leeyihiin codsigan sanduuqa
Jawaab Javier P.
Runtu waxay tahay in barnaamijka uu u muuqdo mid aad u wanaagsan.
Hubi inaad heli karto waxqabad wanaagsan!
Codsi aad u fiican. Aad waxtar ugu leh nashaadaadyo kala duwan.
Waxaan rajeyneynaa in aqoonsiga codka uu wanaagsan yahay
Barnaamijku wuxuu umuuqdaa mid xiiso leh, runtu waxay tahay inay kordhineyso wax soo saar aad u badan, waxaan u maleynayaa in tufaaxa ay tahay inuu ku xisaabtamo inuu ku dhex daro io qaab qeexan barnaamijka Notes-ka.
Xaqiiqdii, codsigani wuxuu u muuqdaa mid aad u xiiso badan, maadaama mararka qaar aan kulan ku jirno, oo maqalku na soo gaaro oo aanan maqli karin.
Jawaab Manuel González Guerra
Nasiib wacan dhamaan waxaan rajeynayaa inaan ka mid noqdo labada nasiib
Barnaamijkani wuxuu ku fiicnaan doonaa u duubista duubista kulanka qoraal.
Jawaab Santi C
Aad ayey faa'iido u leedahay xilliyada shaqada!
Runtu waxay tahay inay umuuqato mid aad ufiican ... aan aragno hadii nasiibku kujiro iskuulka waana tijaabin karaa 🙂
Ku jawaab FranChu
8x33 Podcast: Mustaqbalka Ayaa Hadlaya
Spotify wuxuu bilaabayaa Xeerar, hab cusub oo loogu daro muusikada maktabaddeena